टिकटकमा भाइरल दुलही : खिरपुरी बनाइराख्नु,अचार पनि, धेरै खान्या हुँ! को हुन् त यी हँसिली चेली ?(भिडियो हेर्नुस्)
माइतीघर आएर आमाको हातबाट खिरपुरी र अचार पनि खाएकी छन्।
धनगढी – ‘पर्सी आइहाल्न्या हुँ खिरपुरी बनाइराख्नु। अचार पनि, धेरै खान्या हुँ। हिजो कम खाँ हुँ नि मैले , धेरै खान्या हुँ। नरुनु।’ दुलहीले कारबाट आमालाई सम्झाउँदै भनेको यो भिडियो अहिले निकै चर्चामा आएको छ।
अभिनेत्री एश्वेर्या रायजस्तै देखिने पाकिस्तानी युवती रातारात चर्चामा...
चर्चीत कलाकार गो मिन–तातको क्यान्सरका कारण निधन...